Iwo maCisco I-Mubayiro Mafainari! | Martech Zone
Chikwata changu cheshamwari dzakanaka, Jason, Bill, Carla neni takafambisa kuenda kuCincinnati nezuro kwedu yekupedzisira I-Mubayiro mharidzo naCisco. Nzvimbo yeKarmeri iri padhuze zvakanyanya asi Cisco yaida kutifambisa kuti tikwanise timu yavo izere neInnovation kuti ivepo.
Iine pamusoro pezviuru zvinopfuura zana nemazana zvinopinda mumakwikwi, takasarudzwa uye akaita makumi matatu nemaviri semi fainari. Zvino isu tanga tiri imwe yekupedzisira gumi nemaviri mazano achipa pamberi pebhodhi iro rakatangisa makwikwi. Hapana kumanikidza, huh?
Ini handina kukwanisa kufunga nezve musanganiswa uri nani wevateveri vechikwata vandinoshanda navo pachirongwa ichi. Izvo zvinosetsa, hongu, ndipo paunosarudza timu yevanoshanda nesimba… tese tine mabasa akaoma kare. I-Mubayiro wakawedzera chaizvo pabasa redu uye ndinotenda kuti ndaive neshamwari dzaizokwira pandisingakwanise. Iwe waigona kuona kushushikana kuchisiya miviri yedu uye kunyemwerera kunodzoka mushure mekupedza hurukuro.
Muenzaniso vhidhiyo yeTerepresence iri paYouTube asi haina kunyatso kupa ruzivo rwakazara.
Imba iri tafura yerovhuru yakasarudzika iyo yakatarisana yakanangana nematanhatu makuru masikirini ane akavakirwa-mukati vhidhiyo kamera. Kana iwe ukabatanidza laptop yako kuti uite mharidzo yako, zvinofungidzirwa munzvimbo imomo pasi pezvikwiriso pamwe nekure kure pasi pechiso kuti nhengo dzese dzione.
Isu taive nemapati munzvimbo nhatu dzepaterevhizheni pamusangano wedu pamwe chete nemumwe akafona uyo akangodaira mukati. Iyo sisitimu inongopidigura mufananidzo zvichienderana nenzvimbo iri kutaura. Asi haina kubaya ese masikirini - inongopepeta kuchiratidziro icho munhu arikutaura. Heino yakanaka pikicha uko tech yaive ichishanda kuruboshwe rweboka reSan Jose - unogona kuona hafu yake.
Mukati memaminetsi mashoma ekushandisa iyo sisitimu, iwe unokanganwa zvechokwadi kuti iwe uri chaizvo pamhiri pakatarisana nenyika. chiitiko chinoshamisira zvinoshamisa. Takanyatso fadzwa.
Nemwoyo ichirova uye vatungamiriri vakawanda kubva kuCisco, ndakaedza kunyora pasi mazita emunhu wese asi ndakangorasika nzira. Zvaifadza kuva takatarisana naye Marthin De Beer, zvakadaro! Chikwata cheCisco chaive chisina kujairika, chine nyasha, vachikoka uye vaitsigira mauto. Chero kutya kwaRandy, Paula naSimon kwakakurumidza kubuda nemhepo yehutungamiriri yataive nayo pamberi pedu!
Zvakwana! Ko Presentation yakafamba sei?
Kuedza kutengesa bhiriyoni dhora zano mumaminetsi makumi matanhatu zvirokwazvo chiitiko chitsva. Bill aive mutauriri wedu uye mukomana aichengeta tempo yemusangano. Ini ndakapinda mukati neyakawandisa indasitiri data uye ruzivo rwandinogona. Taiziva kuti chipingaidzo chakaomesesa chaitora timu kuti izive mhinduro nemukana. Carla akaenzanisira yedu yekutsvedza dhizaini kuti zvioneke kutora mamota e data atakatutira mune yega yega slide.
Paunoti "Point of Sales" system, vanhu vanobva vafunga nezve barcode scanner, database yekuverenga, uye kugona kuprinta risiti uye kubhadharisa kiredhiti kadhi. Ndiyo paradigm iyo yataifanira kuchinja mumaminetsi makumi matatu ekutanga!
We aiva kuita kuti timu izive kuti iyo POS ine mukana wakawanda wekuve muzinda webhizinesi nemukana wekubatanidza mune mamwe ese mabhizinesi maitiro - kudzoreredza zvinhu, chikafu, basa, accounting, kushambadzira, mibairo, odha pamhepo, kiosk odha, waya isina waya, kuripota, manejimendi manejimendi, nezvimwe.
Icho chikonzero nei vanhu vachiona POS se'inokudzwa marejista emari 'ndeyekuti izvi ndizvo chaizvo zvave zviri makore ekupedzisira makumi mashanu neshanduko diki kwazvo. Musimboti wezano redu rekupedzisira ndeyekuita iyo POS HUB yeresitorendi, ine network yakachengeteka uye yakavimbika yekutsigira chero kutaurirana.
Zvichida chikamu chakanakisa chehurukuro yacho ndechekuti, sezvataitaura, taigona kuona mumeso zvimiro zvavo zvichichinja uye mababu emwenje achibatidza. Mibvunzo yakachinja kubva kuna 'ani, chii, zvakadii' kuenda 'sei pamusoro, unofungidzira, sei usingaiti'. Iine $ 17B indasitiri, tarisiro inoodzwa moyo nezvipo zvazvino, uye hapana mutengesi ari kutsika ndiro - iyo indasitiri yekudyira inotarisirwa kukanganiswa nekambani ine zviwanikwa zveCisco.
Pakupera kwemusangano, takanga tataura nezvevatete-vemaketi vatengi vakaendeswa nepfungwa dze "Restaurant muBhokisi" uye mubatanidzwa nevatengesi agnostic POS Hardware vatengi. Ehe!!!! Ndiwo mufananidzo wataida kupenda nguva yese iyi. Isu takave nemhinduro dzakanaka kwazvo kubva kuchikwata, mamwe makemikari akanaka mukati mese, uye takavhara musangano. Jason akapukuta pamusangano achizivisa timu kuti nei hurongwa hwaizove hwakakosha pakubudirira kwake semubatsiri.
Handitende kuti zvaigona kunge zvaenda zvirinani! Kune imwezve yekuwedzera mutengo / bhenefiti ongororo inogona kuitwa uye isu yakaratidza zviwanikwa kuwana ruzivo irworwo kunatsa bhizinesi redu. Zviuru zvishoma zvemadhora mumishumo yeindasitiri ingangoda kumedzwa neyemuongorori akanaka kuti awane fungidziro chaiyo.
Iye zvino tamirira! Marthin akavhara musangano nerevo yekuti zvainakidza sei kunzwa dzimwe pfungwa dzekuti Cisco 'yaive' kana 'akaita' chii. Isu tinovimba kuti vanogona kuzvionera pachavo munzvimbo ino. Izvi zvaizosimbisa Cisco sedata remusana webhizimusi, kutanga muchikamu chebasa rekudya, uye kupfuura kune rese indasitiri yekutengesa.
Chikwata chakapedza kufona uye chakaita maminitsi makumi matatu kubvunzana. Tinomirira kusvika Chikumi kuti tinzwe zvabuda! Ratidza nemucherechedzo wekuti… ratidza…
Kana Cisco ikasasarudza isu, isu takatokurukura nezve zano nevamwe vatengesi, ngirozi vatyairi uye vanoita zvemabhizimusi pano mudunhu. Pasina network yeCisco uye kusvika, ichi chingave zano rakaoma kutengesa. Ndokunge, kunze kwekunge tawana iyo mari uye tova vatengi vavo!
Tags: cisco i-mubairocisco iprizetelepresence
May 7, 2008 pa 10: 34 AM
Isu takave nerombo rakanaka kukwanisa kuunza kuboka rakakura revatungamiriri veCisco naGeoffrey Moore. (Munyori we "Kuyambuka Mukaha: Kushambadzira uye Kutengesa High-tech Zvigadzirwa kune Mainstream Vatengi" uye muridzi weChasm Boka.)
Chaive chiitiko chakasarudzika, uye ndinodada nebasa rakagadzirwa nechikwata chedu. Ndatenda, Carla, Doug naJason !!